राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम आइतबार १० विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकबाट पारित राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७४, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, २०७४, थारु आयोग विधेयक, २०७४, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र...
तिहारका लागि याे बर्ष पनि तीन लाख फूलको माला ल्याइँने भएकाे छ । गत वर्षको तिहारमा भन्दा यस वर्ष फूलको मूल्यमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ । गत वर्षको तुलनामा माग बढेका कारण फूलको मूल्यमा वृद्धि हुने भएको हो । गत वर्ष तिहारमा ११ लाख मालाको माग भएकामा यस वर्ष १५ लाख सयपत्री मालाको माग रहेको छ । यस वर्ष उपभोक्ताले एउटा मालाको मूल्य रु ६० देखि रु ७० सम्म तिर्नु पर्ने...
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुखले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बुधबार मात्र अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । जसमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र...
लोकसेवा आयोगले रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान सुरु गरेको छ । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ संसद्बाट पारित भएपछि आयोगले सरकारलाई चाहिने कर्मचारीे पदपूर्ति बुधबारबाट सरु गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव र उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको हो । उहाँका अनुसार आयोगले १९९ सहसचिव र ५५६ उपसचिवका...
सांसदहरुले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा संलग्नको खोजी तथा अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् । उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोलेका अधिकांश सांसदहरुले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयम् सदनमा उपस्थित भएर...
गौचन हत्याको जिम्मा मनोज पुन समूहले लियो, काठमाडौंबाट तीन जना पेस्तोलसहित पक्राउ
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याको जिम्मा ‘गुन्डानाइके’ मनोज पुन मगर समूहले लिएको छ । काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकृतलाई अननोन नम्बरबाट फोन गर्दै घटना मनोज पुन समूहले घटाएको र आफू त्यस समूहको सदस्य भएको दाबी गरेका थिए । मनोज पुन समूहले गएको वर्ष युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीमाथि गोली हानी हत्या गरेको थियो । पुन भारतमा बस्दै नेपालमा...
दसैं नजिकिएसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा घर फर्किने परदेशीको संख्या बढेको छ । परदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसाले घर फर्किंदा ल्याउने सामानको भन्सार नियम थाहा नपाउँदा कतिपयको सामान नै जफतमा पर्ने गरेको छ । तोकेभन्दा बढि सामान ल्याएमा भन्सार कार्यालयले जफत गरिने जनाएको छ । विदेशबाट आउने यात्रुले काँचो सुन र चाँदी ल्याउन पाईंदैन । ५० ग्राम तौल भएका सुनका गहना र ५ सय...
नेपालको संविधान जारी भएको आज (मंगलबार) दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुईवटा संविधानसभाको चुनावपछि निकै लामो रस्साकस्सीबिच संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सभासदको हस्ताक्षरमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । तर संविधान जारी भएकै दिनदेखि यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा अनेकौं आशंका गरिएको थियो । संविधान जारी नगर्न छिमेकी भारतले दिएको दबाब, मधेस केन्द्रित दलको...
सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अनियमितता गरको र विभागीय मन्त्रीलाई अटेर गरेको भेटिएपछि खड्कालाई पदच्युत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । झापा, चितवन, रुपन्देही लगायत ठाउँमा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा...
चालु आवमा पाँच हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ८६ हजार आठ सय ९५ मध्ये चार हजार आठ सय १२ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको निजामती किताबखानाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ८२ हजार ८३ कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यो संख्या निजामती, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको हो । निजामती किताबखानाले गएको...
धुलो व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षण गर्न परिपत्र
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई धुलो व्यवस्थापनलगायत वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयले आज महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने काम एवम् प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि अन्य उपायसम्बन्धी दशबुँदे परिपत्र जारी गर्दै सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ...
राष्ट्रपतिको नजिक बस्दा आमा भेटेजस्तै भयो बालबालिकालाई
काठमाडौ, भदौ २९ – राष्ट्रपति कार्यालयको २ नम्बर गेटमा पुग्दा नै भक्तपुरको परोपकार आदर्श स्कुलकी जेनीकुमारी साह नेपाल हर्षले गद्गद थिइन । किन यतिधेरै खुसी भएकी नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् ‘मैले कहिल्यै पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा छिर्न पाउँछु भन्ने सोचेकै थिइन, तर आज यहाँ आउन पाएँ, त्यसैमा खुशी छु ।’ भित्र राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि त झन् के कस्तो होला भनेर पत्रकारले...
अब हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३४ र प्रदेश सभाका ५५० सांसदहरुले मतदान गर्नेछन् । तर, केन्द्र र प्रदेशका सांसदले दिएको मत भने बराबरी हुने छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारले संसदमा पठाउन लागेको विधेयकमा दुई तहका सांसदहरुको मतभार निर्धारण गरिएको छ । मतभार अनुसार संघीय संसदको एकजना सांसदको दिएको एक मतलाई...
दसैँ नजिकिदै छ । गाउँघरमा दसैंको तयारी सुरु भैसकेको छ । कामका लागि घर बाहिर रहेका आफन्त कहिले, कसरी आउने हुन् भनेर सोधिखोजी हुन थालेको छ । घर बाहिर हुनेलाई पनि कहिले घर पुगौंला जस्तो भैसकेको छ । अरु बेला घर जान र फर्किन त्यति तनाव हुँदैन । तर दसैँमा गाडीको टिकट लिन पनि धौ धौ हुन्छ । त्यसैले बेलैमा टिकटको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । मंगलबारदेखि बुकिङ खुल्ने यसअघि भदौ २२ गतेदेखि...
लोकसेवाले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो
लोकसेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका लागि आइतबारदेखि काम थालेको छ । शुक्रबार व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले नयाँ कर्मचारी भर्ना नरोक्न निर्देशन भर्ना गर्न बाटो खुलेपछि आयोगले आइतबारदेखि काम थालेको हो । आयोगले आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रिक्त दरबन्दी पठाउनका लागि पत्र काटेको आयोगका सहप्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो...